News Archives - Myanmar Competition Commission
ONLINE, 11 October 2021 – Today, the Heads of Agencies of ASEAN Competition Authorities convened to discuss the progress and developments of regional cooperation on competition policy and law in ASEAN. At the meeting, the Heads noted the completion of the Mid-Term Review of the ASEAN Competition Action Plan 2025 earlier this year, and the […]
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းမောင်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် (တနင်္လာနေ့)၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် Online မှ Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အကြီးအကဲများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအပေါ် လုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ၊ တိုင်ကြားမှုများအပေါ် လက်ခံဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်နစ်နာမှုနည်းပါးစေရေးအတွက် ကော်မရှင်အနေဖြင့် အခြားဆက်စပ်ဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ASEAN Competition Action Plan 2025 အပေါ် […]
(Myanmar) မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် (၁/၂၀၂၁) အကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
(Myanmar) ဌာနတွင်း ကွန်ပျူတာအခြေခံ(ရုံးလုပ်ငန်း) သင်တန်း သင်ကြားပို့ချခြင်း
(Myanmar) မြန်မာနိုင်ငံယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ကြားဖြတ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
(Myanmar) မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူရေးရာကော်မရှင်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့်အခမ်းအနားကျင်းပ
(Myanmar) ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေပြဌာန်းချက်များအပေါ် သုံးသပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
Myanmar Competition Commission Held its (2/2020) Regular Coordination Meeting
Myanmar Competition Commission (MmCC) held its regular meeting (2/2020) with the video conferencing system at the Conference Hall of the Minister’s Office, Office No. 3, Ministry of Commerce in Nay Pyi Taw at 10 AM on November 25, 2020 (Wednesday), and Dr. Than Myint, Chairman of MmCC and also Union Minister for Ministry of Commerce, […]
Myanmar Competition Commission Held (1/2020) Coordination Meeting
Myanmar Competition Commission (1/2020) Meeting was held at the Conference Hall of Minister’s Office, Ministry of Commerce at 10:00 AM on February 11, 2020. Dr. Than Myint, the Union Minister, Ministry of Commerce, Chairman of Myanmar Competition Commission, attended the meeting and gaveaspeech.